४ वर्षमा ४ साइकलगाडा महानगरले खोसिदियो....
बिक्रम थापा २९ फागुन ।
ग्राहकः सुन्तला कसरी ?
व्यापारीः एक सय १० हो, सयमा लैजानुस् ।
ग्राहकः अलि मिलाएर देउ त ।
व्यापारीः पसलमा एक सय ६० रुपैयाँले बेचिरहेको छ, हजुर ।
ग्राहकः पसलमा बेचे होला..., हाम्रो पसल यहीँ हो ।
व्यापारीः हजुरलाई मिलाएर भन्दिएको छु ।
ग्राहकः राम्रो हाल है त !
व्यापारीः ल! ल!
ग्राहकः अहिले बुढीले गाली गरी भनी ल्याएर फिर्ता दिम्ला,,, कति रुपैयाँ दिनु पर्‍यो ? असी ।
यस्तै यस्तै संम्वाद चलिरहेको थियो व्यापारी र ग्राहकबीच । हेर्दा सुकिला मुकिला देखिने ग्राहकले सुन्तलाको भाउमा बार्गेनिङ गर्दै थिए । एक केजी सुन्तला लिए र गए । त्यसपछि बल्ल हामीसँग कुरा गर्न फुर्सद् भयो ।
‘मैले चार वर्ष भयो साइकलमा फलफूल बेचेको । त्यति नै वर्ष साइकलगाडा पनि महानगरपालिकाले जफत गर्‍यो । साइकल लिन जाँदा महानगरपालिकाले पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना लिन्छ । मालसामान दिन्छ तर साइकलगाडा फिर्ता गर्दैन । यसरी नै चलेको छ मेरो व्यापारिक यात्रा ।’
यो भनाई हो, काठमाडौँका गल्ली तथा चोकचोकमा साइकलगाडा डोर्‍याएर फलफूल बेचेर हिड्ने १७ वर्षीय युवा वृजेशकुमार यादवको । भारतको उत्तर प्रदेशको मोतिहारी जिल्ला स्थायी घर भएका उनी घरको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन चार वर्ष अघि काठमाडौँ आए । जसोतसो पैसाको जोहो गरेर साइकलगाडा बनाए । महानगरको नजर बारम्बार उनको गाडामा पर्‍यो । तर जति पटक गाडा जफत हुन्छ त्यति नै पटक साइकल गाडाको जोहो गर्न लागी पर्छन् । एउटा साइकल गाडा बनाउन चार-पाँच हजार खर्च लाग्ने यादव बताउँछन् । उनले यसअघि चार वटा गाडा गुमाइसकेका छन् ।
विहान जुरुक्क उठ्ने वित्तिकै आफ्नो साइकलगाडा डोर्‍याएर कुलेश्वरको फलफूल वितरण केन्द्रमा पुग्छन् । अलिकति पनि ढिलो भयो भने महंगोमा परिने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘६ बजे भन्दा पछाडि मालसामान लिन गयौँ भने महंगोमा परिन्छ । उठ्ने वित्तिकै जाने गर्छु । सामान लोड गर्दा त्यस्तै ९/१० बज्छ ।’
दैनिक गाडामा सामान विक्री गर्दा साँवा बाहेक कहिले पाँच सय त कहिले एक हजार मात्र आम्दानी हुने गरेको बताए । महानगरले साँझ ६ बजे पछि मात्र फुटपाथमा पसल गर्न दिए पनि दिउँसोको समयमा सामानहरु जफत गरिदिने गरेको दुखेसो सुनाए । उनले विशेषगरी दिउँसोको समयमा भन्दा साँझमा बढी व्यापार हुने गरेको बताउँछन् । आफ्नै विहारी शैलीमा भन्छन्, ‘दिउँसोको समयमा खासै व्यापार हुँदैन । साँझतिर मात्र व्यापार हुने गर्छ । ५/१० रुपैयाँ नाफा राखेर बेच्छु । सामानको भाउ मिलाएर नपदिए ग्राहक अन्तै जान्छ ।’
कक्षा १० को पढाई सकेर नेपाल आएका वृजेशकुमारले आगामी दिनमा पनि गाडाको पसल सञ्चालन गर्ने बताउँछन् । उनले दैनिक आफ्नो साइकलगाडामा एक क्विन्टल ३/४ थरीका फलफूल जातको सामानहरु राखेर हिड्ने गरेको बताउँछन् । गाडामा भएका फलफूललाई औँलाले देखाउँदै गादवले भने, ‘सुन्तला २० केजी, अङ्गुर २०, अनार २० र केरा ४० केजी छ । बोकेर हिड्दा साह्रै गाह्रो हुन्छ । सबै सामान विक्री गरेपछि डेरामा फर्किन्छौँ ।’
गाडाको व्यापार गर्न रुचाउने वृजेशसँगै उनका दाईभाई, काका र भिनाजु बल्खुको एउटा घरमा डेरागरी सबैसँगै बसे पनि फरक–फरक ठाउँमा साइकल व्यापार गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार एकै दिनमा नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, चावहिल र गौशाला लगायतका स्थानमा व्यापार गर्दै हिड्ने गरेका छन् ।
भाग्यमा बढी विश्वास राख्ने उनको परिवारमा सात जना सदस्य रहेको छ । उनले आफ्नो परिवारको घर खर्चका लागि महिनाको १५-२० हजार पठाउने गरेको उनको भनाई छ । ‘राम्रो कमाई भए २० हजार कम भए १५ हजार घर पठाउँछु,’ उनले भने ।